Semrush na-agbakwụnye Ngwá Ọrụ iji Na-akpagharị Na saịtị Gị ma Chọta Okwu HTTPS | Martech Zone
Y’oburu n’itinyela ihe omuma ihe nchoputa nke ihe nchọgharị iji gbalita weputa onyogho ma obu itinye ihe na echeghi echezọ, ịmara otu o si ewute gị. Kechioma n'ihi na anyị, e meela a kediegwu update ka Semrush's keukwu Nnyocha saịtị - mgbakwunye nke Onye nyocha HTTPS.
Nwere ike ugbu a nyochaa HTTPS dị omimi nke na-ekpuchi pasent 100 nke ndụmọdụ nchedo Google.
Gini mere HTTPS ji Dị Mkpa?
Kwaga na HTTP gaa HTTPS abụghị naanị mma ịnwe, ọ dị mma nke ukwuu. Emejuputara HTTPS iji kpuchido nzuzo na iguzosi ike n’ezi ihe nke data gbanwere n’etiti ihe nchọgharị gị na ebe nrụọrụ weebụ: kuki, logins na okwuntughe, nkọwa kaadị kaadị, wdg. data na weebụsaịtị gị.
Mere HTTPS ji chọọ nyocha
Usoro nke mbugharị site na HTTP gaa HTTPS bụ njem na-adịghị mma, ma ọ gwụla ma ị mejuputara HTTPS n'ụzọ ziri ezi, mgbalị gị niile iji bụrụ chi nke nchekwa ga-efu. Mmehie ndị kachasị dị na ya gụnyere ihe ndị dịka:
Kubie ume asambodo
Asambodo debara aha na ebe nrụọrụ weebụ na-ezighi ezi
Na-efu aha ihe nkesa na-efu (SNI) nkwado
Old protocol nsụgharị
Ngwakọta ihe nchekwa.
N'adịghị ka nyocha ndị ọzọ nke HTTPS dị ugbu a, Semrush na-agwa gị kpọmkwem ebe na ụdị ihie ụzọ ị meworo na otu esi edozi ya. Nyochaa saịtị ahụ HTTPS Checker nwere interface enyi na enyi na nyocha niile gosipụtara n'ụzọ doro anya. Nke kachasị mma, e wuru akwụkwọ ndenye ego dabere na ya Ihe ntinye nke HTTPS nke Google.
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ Semrush
Tags: ihe nchọgharịhttpshttps nyochahttps na-ariNjehie httpsagwakọta ọdịnayapeeji ndị echekwasiripeeji nkesemrushoditi